Kuchinja Mavara Kunoita Cuttlefish | Zvakangoitika Zvega Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Zulu
KAMHUKA kemugungwa kanonzi cuttlefish kanogona kuchinja mavara ako kofanana nepakanenge kari zvekuti ungatotadza kukaona. Imwe ongororo yakaitwa yakaratidza kuti cuttlefish “dzinozivikanwa kuti dzine mapatani emuviri akasiyana-siyana uye dzinogona kungoachinja mukubhwaira kweziso.” Dzinokwanisa sei kuita izvozvo?
Funga izvi: Cuttlefish inochinja mavara ichishandisa rumwe rudzi rwemasero ari nechepasi peganda rayo anonzi machromatophore. Machromatophore ane twakaita setumabhegi tunenge twakazara nepigment ine mavara akasiyana-siyana, uye tumabhegi twacho twakapoteredzwa netutsandanyama. Kana cuttlefish yava kuda kuchinja ruvara rwayo kuti ifanane nepainenge iri, pfungwa dzayo dzinotumira mashoko anoita kuti tutsandanyama twuya twudzoke mukati. Izvi zvinobva zvaita kuti tumabhegi twacho twufute uye mamwe mavara ari mupigment yacho awedzere kuoneka, zvoita kuti cuttlefish yacho ibva yatochinja ruvara nepateni yemuviri wayo. Cuttlefish inogonawo kuchinja ruvara rwayo kuti ikwezve hono kana kuti hadzi, uye pamwe inozviita senzira yekukurukura nedzimwe.
Mainjiniya epaUniversity of Bristol, kuEngland, akagadzira chimwe chinhu chakada kufanana neganda recuttlefish. Vakatora marubber matema eraundi ndokuaisa pakati petunhu tudiki tunoshanda sezvinoita tsandanyama dzecuttlefish. Mainjiniya acho paakabayirira chinhu chacho chakada kufanana neganda recuttlefish pamagetsi, tunhu tuya twakaita setsandanyama twakabva twadhonza marubber aya matema akabva atatamuka, chinhu chacho chikabva chawedzera kusviba.
Mumwe injiniya anonzi Jonathan Rossiter, akatsanangura tsandanyama dzecuttlefish achiti “dzinoshamisa asi hadzina kugadzirwa nevanhu.” Tsvakurudzo iri kuitwa pamusoro petsandanyama dzecuttlefish inogona kupedzisira yaita kuti pagadzirwe hembe dzinokwanisa kuchinja mavara pasina kana sekondi. Rossiter anotaura kuti vanhu vanogona kuzosvika pakupfeka hembe dzakagadzirwa nejira rinochinja chinja seganda recuttlefish kuti vasaoneke nekukurumidza kana kuti kuitira mucheno.
Unofungei? Zvakangoerekana zvaitika zvega here kuti cuttlefish ikwanise kuchinja mavara ayo kana kuti pane akaisika ichikwanisa kudaro?